osrs tsara indrindra ao slot an'izay nahafaty olona gear
osrs tsara indrindra ao slot ranged offhand
osrs tsara indrindra ao slot peratra melee
poker latabatra handrehitra ambony fisakafoana
Lalao fitiliana labs, Lalao Laboratories Iraisam-pirenena (GLI) dia mankalaza ny faha-efa-taona ny raharaham-barotra fifanarahana amin'ny Meksikana IZANY mafy ny Normalizacion y Certificacion kalaza goavana amin'ny elektronika (NYCE) inona no teny afaka u ho avy casino. Ara-tsiansa ny Lalao Fikambanana dia mety ho mandalo kely ny tsy miorina tsara tany toy ny tara amin'ny ny amboarina amin'ny Playtech, fa ny fanampiny MDI fialam-Boly no mampiseho famantarana ny mitana ny fitomboana. No feo tsara crack feo matsiro ampy ho anao?Hahazo ny farany filokana vaovao avy any Calvin Ayre.
Ny filoha, ny toetra Mampiavaka ny Vondrona sy ny Lohan ' ny Famoronana Manamboninahitra ho an'ny Siantifika Games, Steve Saferin, hoy ny fanambarana: "Bazooka fefy hihy no anisan'ny fiainan'ny olona maro, ary mihoatra noho ny antsasaky ny tapitrisa farantsa ny Bazooka ditin namidy isan-taona," hoy ny "Tena mahazatra ny Amerikana brand, izay tokony hanao ireo tapakila hira tena amin'ny loteria mpanjifa." Ny fifanarahana manome loteria zo, amin'ny alalan'ny MDI, mba hampiasa fomba ofisialy amin'izao fotoana izao sy ny vokatra ara-tantara ny logos, zavakanto sy ny famantarana ny tsena ny lalao osrs tsara indrindra ao slot an'izay nahafaty olona gear. Salvador Sánchez ny NYCE nanampy hoe: "GLI sy NYCE efa miasa mafy mba hananganana ny tontolo iainana ao Meksika izay no azo antoka sy ara-drariny ho an'ny rehetra – mpandraharaha, dalàna, sy ny mpilalao osrs tsara indrindra ao slot ranged offhand. Ny asa dia tsy maintsy atao amin'ny fenitry ny fanaovana hatreto dia tena manan-danja." NYCE sy GLI nilaza izy ireo no hihazonana ny fanamarinana ny fandaharana ho an'ny lalao fitaovana toy nangataka ny governemanta Meksikana. Amin'izao fotoana izao ny bola dia nanambara izany no nanampy ny Bazooka fefy ditin brand ny portfolio amin'ny alalan'ny multi-taona fifanarahana amin'ny Topps Orinasa osrs tsara indrindra ao slot peratra melee.
GLI Talen'ny Fampandrosoana an'i Amerika latina sy Karaiba, Karen Sierra-Hughes, dia niteny hoe: "GLI sy NYCE efa niasa tamim-pahazotoana tokoa mba hitondra ny fenitry ny lalao any Meksika, ary roa fikambanana dia tena mirehareha ny asa hatramin'izao. Zava-dehibe izany, izay no izy nofy ka ireo anarana ireo?Na izany aza, ny promo dia fanatitra mpilalao ny fahafahana handresy £200 cashback maimaim-poana ao anatin'ny ezaka mba hisarihana ny mpankafy azy vaovao poker latabatra handrehitra ambony fisakafoana.